NgeCawa, ngoJulayi 22, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Izolo bendinentlanganiso emnandi kunye nomphathi wenkampani wasekhaya. Ukhawuleza abe ngumcebisi kunye nomhlobo. UkwangumKristu ozinikeleyo. Nam ndingumKristu… kodwa phambi kokuba ucofe apha, ndicela undichazele. Ndiyakholelwa kuYesu kwaye ndimsebenzisa njengomcebisi kwindlela endibaphatha ngayo abanye. Ngama-39, andenzanga msebenzi umkhulu kakhulu koku kodwa ndizama ukuphucula. Nanku apho ndizabalaza khona:
Ndikufumanisa kunzima ukufikelela ebantwini. Njengoko ndikhula ebomini, mna ufuna ukuvula iingalo zam kuthetha abantu - kodwa kungcono ndingabaniki nexesha losuku. Kwinkampani yezopolitiko (ngaba yiyo yonke inkampani?), Andidlali kakuhle nabanye. Andidlali. Ndiyawucaphukela umdlalo-ndifuna ukwenza umsebenzi. Ndiyakucaphukela nokudlalwa. Akukho nto indicaphukisa ngakumbi.
Ndizabalaza ukuba yanele kangakanani. Ndiyarenta kuba andifuni kuba nekhaya. Ndiqhuba imoto entle. Andizithengi izinto zokudlala ezininzi. Xa kuthelekiswa nehlabathi liphela, ndisisityebi. Xa kuthelekiswa ne-United States, ndikudidi oluphakathi, mhlawumbi ndingaphantsi kancinci. Ngaba kulungile ukuhlala kamnandi xa abanye abasehlabathini bengekho? Ngaba unokukhululeka njani? Ngaba kusisono ukuba sisityebi? Andazi.
Ngaba kufanelekile ukuba ndilwe-mfazwe nokuba oko kuthetha ukuba abantu baya kuhlala kubuzwilakhe bokucinezela? Ngaba kufanelekile ukuba ndizikhathaze ngelizwe lam nangamajoni ethu? Ngaba ngumKristu 'ukunyamekela imicimbi yakho' xa abanye bebandezeleka? Ukuba ubona umntu ezama ukubulala omnye umntu kwaye ekuphela kwendlela onokubamisa ngayo kukumbulala - ngaba ngumKristu lowo? Imithetho elishumi ichaza ukuba akufuneki sibulale - siqhelene nobuJuda, ubuKrestu kunye ne-Islam.
Ukuze ube ngumKristu obalaseleyo, ngaba yindlela ophila ngayo ubomi bakho, ubudlelwane bakho noThixo, okanye indlela oyitolika ngayo iBhayibhile? Ndifunde iincwadi ezimbalwa ezimnandi ngoguqulelo lweBhayibhile olunikezela ubungqina bokuba iimpazamo zenziwe kuguqulo. Amanye amaKristu anokuthi ndiyanyelisa nangokukhankanya loo nto. Ndicinga nje ukuba likratshi kwicala lethu ukukholelwa ukuba kuguqulelo olusuka kwisi-Aramaic, isiGrike, isiLatin (kabini), kwi-Queen's English, kwi-English yesiNgesi ukuba asilahlekanga nto kuguqulo. Ayikuko ukuba andiloyiki iLizwi, kungenxa yokuba ndiyisebenzisa njengesikhokelo hayi iseti yokoqobo yezalathiso.
Ndiyathanda ukuhleka. Andikuthandi ukuhleka 'ngabantu', kodwa ndiyakuthanda ukuhleka 'ngabantu'. Ndingumntu otyebileyo kwaye ndiyazithanda iziqhulo malunga nabafana abatyebileyo. Ndingumfana omhlophe kwaye ndiyathanda ukuva isiqhulo esikhulu ngabantu abamhlophe. Ndihleka zonke iziqhulo ezingachanekanga kwezopolitiko eSouth Park kwaye ndizenzile ezimbalwa. Ndicinga ukuba kulungile ukuba sihleke ngathi ukuba nje sikumoya olungileyo, hayi okhohlakeleyo. Umahluko wethu owahlukileyo owenza eli hlabathi libe nemibala. Ukuziqonda endaweni yokuzama ukuzifihla kubalulekile ukuba sihloniphane.
Ndiyazi ukuba oku kungaphezulu kweposti yefilosofi kunaleyo uyiqhelileyo kodwa ndicinga ukuba iyehla ngokwazi 'ukuthelekisa' ukholo 'kuyo yonke into esiyenzayo. Ukuba nokholo ebantwini sisipho esikhulu kakhulu - kodwa kunzima ukukhuthaza ukuba unikwe abantu basiphoxe rhoqo. Zona nkokeli zibalaseleyo kuphela ezinoluhlobo lokholo.
Ukwazi lelinye lala magama ahlala ephikisana nawo kwaye efuna i-hubris ethile, akunjalo? Sitsho izinto ezinje:
"Ndiyayazi indlela oziva ngayo" - hayi, awazi.
"Ndiyazi ukuba abathengi bafuna ntoni" - sihlala sifumanisa ngokwahlukileyo
“Siyazi ukuba sizivelele” - kodwa asikwazi nokunyanga umkhuhlane oqhelekileyo
"Ndiyazi ukuba ukhona uThixo" - unokholo olungagungqiyo lokuba ukhona uThixo. Ngenye imini uya kuyazi, nangona!
NgoLwesihlanu ndiye ndasela iziselo nabantu abambalwa. Sixoxe ngazo zonke izinto zokuthintela- kubandakanya ezopolitiko kunye neNkolo. Ndothuswa kukufumanisa ukuba abahlobo bam abambalwa babengakholelwa kuThixo. Ndiyifumene ngokwenene. Ndicinga ukuba kuthatha enkulu ukholo ukuba ndingakholelwa kuThixo kwaye ndijonge phambili ekuthetheni nabo ngakumbi malunga nokuba bafike njani kwisigqibo sabo kwaye ngoba. Ngokuqinisekileyo andibajongeli phantsi abantu abakholelwa kuTixo- kuba bengabantu, ndiyakholelwa ukuba kufuneka ndibaphathe ngentlonipho nothando njengaye nawuphi na umntu.
Umhlaba wethu uyathanda ukusiqhuba sibe ngamakholwa kunye nabangakholwayo ngaphandle kokunyamezelana okanye ukuhlonelana phakathi. Ukwazi ukuba kumnyama kwaye kumhlophe, ukholo luyakuxolela kwaye luvumela izinto ezinje ngentlonipho, uxabiso kunye nesibindi. Njengokuba ndikhula, ukholo lwam luya lusomelela. Kwaye olo kholo lunyamezelo ngakumbi kubantu 'abazi'.
Ndiyathemba ukuba ndingaqhubeka elukholweni lwam kwaye ndamkele abanye.
QAPHELA: Ndilibele ukukhankanya iposti endiqhubileyo ukuba ndibhale ngakumbi malunga noku. Enkosi Nathan!
Hayi ukukroba enye iposti (kude nayo), kodwa oku kuyeyona nto ingcono kakhulu.
Kucingelwe kakuhle kwaye kulungile. Ndisandula ukubhloga malunga neeblogi zokushumayela eziqhwalelayo, kwaye ukuba iibhlog ezininzi zinje ... ndingayindoda eyonwabileyo
esi sithuba sesinye sezizathu zokuba uya kuhlala unendawo esisigxina kumfundi wesondlo. Ngokuqinisekileyo isenokungabi yitekhnoloji okanye intengiso esekwe kodwa ngamanye amaxesha ayonzakalisi ukwazisa abantu ukuba kukho icala lomntu kuthi kwiigeeks.
IBravo. Yiyo yonke.
Ndiyathanda ukuba nengxoxo elungileyo yenkolo. Ndizithatha njengomntu ongakholelwa kubukho bukaThixo, kodwa ibe yinto ebangela umdla kwisilayidi kule minyaka mihlanu idlulileyo. Andikwazi ukuyifumana into yokuba, ukuba uyakholelwa kwinkolo enye, uyakuvumela ukubandezeleka okungapheliyo kulo lonke uluntu, nokuba babephila ubomi obumnandi kangakanani.
Ngokuqinisekileyo yingxoxo elungileyo, nangona…
Ngokuqinisekileyo ayisosono ukuba sisityebi. Kodwa ndiyawuqonda umzabalazo wakho. Xa ndandisekholejini, ndaya kuhambo lokuya e-India apho sasisebenza neenkedama kunye neqhenqa (ewe basekhona). Ndizabalaze iinyanga ndibuyele ekhaya ngendlela abantu abachitha ngayo i- $$ kwizinto "zobuyatha".
Emva koko ndathatha umsebenzi kwivenkile eseHallmark ngexesha lekhefu leKrisimesi kuba ndifuna iidola zeencwadi kwisemester elandelayo. Ngeli xesha, ndiye ndabona ukuba nangona izinto ezinje ngeSarlovski crystal zingenaxabiso laphakade- isanika abantu imisebenzi.
Iipeni ezintle zinokuba zintle kakhulu - kodwa kukho umenzi wepeni osapho olonwabileyo ukuba unomsebenzi.
Ndicinga ukuba eyona nto iphambili yile- nokuba ubutyebi okanye awunayo - ngubani othembela kuye? Kwaye oko kubonakala njani kwindlela oyisebenzisa ngayo imali yakho?
Ngokuphathelele kumagqabantshintshi owenzileyo malunga noburharha-bendifunda ngokungazenzisiyo uHlumo lukaKristu. Kwaye jonga ngokwahlukileyo kwiTestamente eNtsha. Kodwa iyathetha-kwaye ndiza kuyixhela le nto- indlela uburharha obungasetyenziselwa ngayo ukujongana nemeko yomntu- ukuba nje sizimisele ukuzihleka.
Ngapha koko, enkosi ngeposi ehlaziyayo eyahlukileyo!
Jul 23, 2007 ngo-8: 08 AM
Isicatshulwa kunye nothando lweli posi zintle. Izinto ezigubungelayo zezona zinto kufanele ukuba sithethe ngazo, kanye kunye newebhu ye-2.0 kunye netekhnoloji yentengiso, njl.njl. Ukuba asixoxi ngeziseko-izinto ezichaziweyo-ezazisa ukubonakaliswa kwazo ngezenzo, ke 'Hayi ukuqonda ngokupheleleyo isenzo sethu.
NjengomKristu (kokubini ngegama kunye nokholo), ndibekelwe bucala (ukuba ndingumntu ozimeleyo) ukuya kwilizwe liphela ngendlela ethile - njengabantu abangakholelwayo kubukho bukaThixo, abakholelwa kubukho bukaThixo, njl.njl. Kubalulekile ke kuthi ukuba sihlale sifuna ukuqonda nokubuza ezo zinto zichaziweyo kunye nemithetho-siseko evelayo- ngokudibeneyo nangokodwa. Ndiyoyika ukuba uninzi lwabahlobo bam kunye nabantu endisebenza nabo eMelika bayayiphepha inkolo kunye nezopolitiko hayi kuba izihloko zinobuqu kakhulu, kodwa ngenxa yokuba thina njengoluntu silibele ukubaluleka kunye nokubaluleka kokuqonda izinto ezichaziweyo kunye nemigaqo (ubuKrestu, ukungakholelwa kubukho bukaThixo, ubuJuda et al. .), kwaye endaweni yoko unokuxoxa kuphela ngezi zinto ngohlobo lomgangatho weJerry Springer, olunemveliso ehambelana kakhulu.
Ndicinga ukuba iiposti zebhlog ezinje linyathelo elihle kwicala elifanelekileyo.
Qhubeka nomsebenzi omkhulu, mzalwana.
Iposti enkulu. Kumnandi ukuva ukuba kusekho abantu abachitha ixesha elithile bethetha ngale nto. Uninzi lwabantu abathanda ishishini bacinga nje malunga neshishini labo kwaye uninzi lwabo balibala nangeentsapho zabo ..
Iposti enkulu. Kumnandi ukuva ukuba kusekho abantu abachitha ixesha elithile bethetha ngale nto. Uninzi lwabantu abanengqondo yeshishini bacinga nje ngamashishini abo kwaye uninzi lwabo lude lulibale nosapho lwabo.
Okokuqala, kutheni le nto amakristu kufuneka azichaze? Kwaye ngokwenene, kutheni le nto kufuneka ukuba nabani na azichaze ukuba ungubani na?
Ndilithiyile igama elithi "ukholo" ngenxa yokuba sisenzo esingenangqondo sokukholelwa. Into emnandi malunga "nenkolelo" kukuba iqhutywa kuphela kukuqonda - njengoko ukuqonda kwakho kuguquka, zikho neenkolelo zakho. Umceli mngeni okholweni kukuba kuncinci kakhulu kwigumbi lotshintsho (okanye ukuhlaziya!) Kunye nolwazi olutsha oluphikisanayo okanye ucelomngeni ukholo luyaliwa kwangoko.
Kum, ndinazo 'iinkolelo' - ndiyakholelwa izinto malunga nezinto, kwaye zinokutshintsha ngenxa yokuqonda. Ndikhululekile ukutshintsha ukuqonda kwam, oko kuthetha ukuba ndinokhetho, kwaye ngokuzikhethela ndinoxanduva lwamva lam.
Ndineposi ndihleli 'kuyilo' kwiinyanga ezimbalwa ngoku, kwaye ukubeka nje i-0.02 yeedola apha kuye kwandinceda ukuba ndisebenze yonke le nto (ngoku ukuba ndingakulungela ukubhalwa kwam apha kwiphedi).
UDoug, sisithuba esihle kwaye ndiyabulela kuwe.
(Inqaku lobuchwephesha ecaleni: naziphi na iingcinga zokuba kutheni kufuneka ndikhubaze ukudibanisa kwiFireFox ukuze ndikwazi ukuthumela apha?)
Uyabheja. Yonke into endinethemba lokuyenza kukuba abantu bacinge. Yile nto ibhlog emalunga nayo 🙂